PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: February 2015
အောက်ဖော်ပြပါ ပုံအား သူ၏ ဖေ့စ်ဘွတ်တွင်တင်မိသဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရကြောင်း ပူးတွဲပါစာအရသိရှိရ
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်ဆစ်က ဒီနေ့ ဒီလိုကျေညာလို့ အံ့သြမိတာမျိုး မရှိဘူး။ ခံပြင်းတာမျိုးတော့ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို ဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်မှတ်ခဲ့ပြီးသားပါ။ သူ့ကို UNFC ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်က အောက်ကျို့ခံပြီး သူ့ဌာနချုပ်မှာ သွားတွေ့ရတယ်ဆိုကတည်းက မဟုတ်ခဲ့တာပါ။ နောက်ပြီး NCA အတွက် NCCT က ကြိုပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ သီးခြားအနေနဲ့ ရန်သူနဲ့ ကတိကဝတ် ပြုသွားခြင်းဟာ သစ္စာဖောက်သူတို့ရဲ့ အလုပ်တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်တယ်။
အဲဒီလို ကတိကဝတ်ပြုပွဲမှာ KNU အနေနဲ့ ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမဲ့ KNU ကတော့ သူတို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးရဲ့ သဘောထားမျှသာ ဖြစ်ကြောင်း ကျေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအချင်းချင်း စုစည်းညီညွတ်မှုကို သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်က ကရင်အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ နာမည်အချို့ကို အသုံးချပြီး ကိုးကန့်စစ်ပွဲမှာ သူတို့ဘက်က တရားကြောင်း သက်သေပြဖို့ ကြိုးစားကြရာ DKBA က နည်းနည်းတော့ နောက်ကျပေမဲ့ ကျေညာချက်ပြီး သူတို့ရပ်တည်ချက် မပြောင်းလဲကြောင်း တိုင်းရင်းသားတွေကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုးကန့်ကို ဘဝတူ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်တယ်လို့ DKBA က သဘောထားသလို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတိုင်းကလည်း သဘောထား ကြပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာပဲ RCSS ခေါင်းဆောင်က အစိုးရထောက်ခံတဲ့စကား၊ NCCT ကို ပစ်ပယ်တဲ့စကား၊ တာဝန်မဲ့စကားကို ပြောလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် UNFC ညီလာခံကနေ KNU နုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်၊ အစိုးရနဲ့ ကတိကဝတ်ပြုခဲ့တဲ့အဖြစ်၊ နေပြည်တော်ကို ချောင်းပေါက်အောင် သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူရှိနေလဲဆိုတာ အားလုံးက ဘွားခနဲ တွေ့လိုက်ရပါပြီ။
မိမိက ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောလိုက်မယ်။
＂ဇင်းမယ်မြို့မှာ ရှိတဲ့ ဟန်ယောင်ဝေရဲ့ ဌာနချုပ် Pyidaungsu Institute ပါပဲ။＂
ငြင်းဆိုလိုသူတွေ ရှိက CB မှာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ငြင်းဆိုကြပါရန်။
လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီး စစ်တပ်မှ အနီးကပ် ပစ်သတ်ခြင်းခံထားရသည့် အရပ်သားပြည်သူများ။
လောက်ကိုင်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်တဲ့အခါ အရပ်သားတွေကို မသင်္ကာတာနဲ့ ဖမ်းပြီး သတ်၊ မဲမဲမြင်တာနဲ့ ကြောက်လန့်ရင်း ပစ်တာနဲ့ သေသွားတဲ့ အရပ်သားတွေရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှု့ မြောက်ကြောင်း လူတိုင်း သိသလို၊ ဗမာ့တပ်မတော်ကလည်း ကောင်းကောင်းသိတဲ့အခါမှာ၊ ကြက်ခြေနီ အလံထောင်ခိုင်းပြီး သတင်းထောက်ပါတဲ့ ကားကို လောက်ကိုင်က ထွက်တာနဲ့ လမ်းတလျှောက်မှာ တာဝန်ယူထားတဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်သားတွေကို သတင်းပေး ပစ်ခိုင်းပြီး ကြက်ခြေနီအဖွဲ့နဲ့ သတင်းထောက်တွေကို သူပုန်တွေက ပစ်တယ်ဆိုတဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်မှု့တွေကို ထပ်ပြီး ကျူးလွန်နေတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရရှိထားပါပြီ။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်း တအာင်းတပ်မတော် လှုပ်ရှားရာနယ်မြေ ကုန်းကြမ်း-လောက်ကိုင်ဒေသ၊ တာရွှေထန် အနီးတွင် ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက် နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီမှ ၁၁း၀၀ အထိ တအာင်းတပ်မတော် ဗျူဟာ(၅) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၄၄၇)နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲတွင်နှစ်ဘက်ထိခိုက်ကျဆုံးမှုမသိရှိရသေးပါ။
၄င်းနောက် တာမိုးညဲမြို့နယ်ခွဲ၊ မန်ဆာကျေးရွာနှင့် နမ့်ဝမ်းကျေးရွာကြားတွင် ဗျူဟာ(၄) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၅၇၁) ၁၅း၀၀နာရီမှ ၁၅း၄၅ နာရီအထိ တတိယအကြိမ် တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲတွင်နှစ်ဘက်ထိခိုက်ကျဆုံးမှုမသိရှိရသေးပါ။
၁ - ၀န်ကြီးဟာ နယ်စပ်ဒေသက တိုင်းရင်းသား လူမျိုးဖြစ်ရမယ်။...
၂ - ၀န်ကြီးရဲ့လက်ထောက်နှစ်ဦးကလည်း နယ်စပ်ဒေသက မတူညီတဲ့တိုင်း၇င်းသား ၂ ဦးဖြစ်ရပါမယ်။
၃ - ဒီဝန်ကြီး ၃ ပါးစလုံးဟာ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့် ရှိတယ်။
၄ - ဒါပေမယ့် သူတို့မဲထဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ ၃ ယောက်ထဲမှာ တစ်မဲပဲ ထည့်ရမယ်။
၅ - နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်သားတွေ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချူပ်ခွင့် အပြည့်အ၀ရှိရမယ်။
၆ - မြစ်ကြီးနားခရိုင် နဲ့ ဗန်းမော်ခရိုင်ကို ကချင်တောင်တန်း ဒေသနဲ့ ပေါင်းထည့်ပြီးတော့ ကချင်ပြည်နယ် အဖြစ်သတ်မှတ်တယ်။
၇ - တောင်တန်းဒေသဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာကဲ့သို့ အခွင့်အရေးနဲ့ အထူးအခွင့်အရေးများ အပြည့်အ၀ခံစား ခွင့်ရှိရမယ်၊ ဆိုလိုတာက အခွင့်အရေးနဲ့ အထူးအခွင့်အရေးဆိုတာက ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆိုရင်လဲ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးအပြည့်အ၀ ရရှိရမယ်။
၈ - ငွေကြေးသုံးစွဲမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သျှမ်းပြည်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကို မထိခိုက် မနစ်နာစေရဘူး၊ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်ကို မြန်မာပြည်အစိုးရက ဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့သွားမယ်။
၉ - ငွေကြေးရှာဖွေသုံးစွဲမှုမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် အပြည့်ရတဲ့ အချိန်အထိ (သျှမ်းပြည်လို ကိုယ်ခြေပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်တဲ့ အချိန်အထိ) ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမယ်။။
ထိုပြင်ပင်လုံစာချူပ်တွင် မပါရှိသော အရေးပါသည့်အချက်တစ်ချက်မှာ လွတ်လပ်ရေးရပြီး (၁၀)နှစ် အကြာတန်းတူညီမျှမှုမရှိပါက ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် ဟူရ်ျ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းက တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များအား နှုတ်ကတိပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါကတိအား ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ထည့်သွင်း ရေးဆွဲထားပါသည်။
သျှမ်းသံတော်ဆင့်မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည် ။ ။
မြန်မာစစ်သွေးကြွ စစ်လော်ဘီ ကောက်ကျင့် စဉ်းလဲ ယုတ်မာမှုအပေါ် အမျက်ဒေါသထွက်သော D.K.B.A ဂလိုထူးဘောစစ်ဌာနချုပ် က ကြေညာချက်
အင်တာနက် သတင်း မီဒီယာများတွင် ထွက်ပေါ်နေသော DKBA မှ အစိုးရတပ်နှင့် ပူးပေါင်းပြီး MNDAA ခေါ် ကိုးကန့်တော်လှန်ရေးအား တိုက်ခိုက်မည် ဆိုသည်မှာ လုံးဝ မဟုတ်မမှန်ကြောင်းနှင့် MNDAA ခေါ် ကိုးကန့် တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့သည် မိမိတိုနှင့် ဘဝတူ တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် ၄င်းတို့၏ အမျိုးသားဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးအတွက် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်နေသည်ကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာအစိုးရ ကောက်ကျင့်ယုတ်မာမှုကြောင့် မဟာမိတ် တော်လှန်ရေး နိုင်ငံရေး အဖွဲအစည်းအသီးသီးနှင့် မိဘပြည်သူများ မိမိတို့အပေါ် နားလည်မှု မလွဲကြပါရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ ခေါ် MNDAA သည် မိမိတို့ နည်းတူ တိုင်ရင်းသား လူမျိုးစု တစု ဖြစ်သည်ကို ပြည်သူအများ သိရှိပါရန် ကြေညာအပ်ပါသည်။
(တရုပ် ပါတာလား။ တရုပ် အစိုးရပါတာလား ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ။ ဦးအောင်မင်းေ ဖဖေါ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ဒီဗွီဘီ အင်တာဗျုးမှာ တရုပ်အစိုးရ မပါဘူးလုို့ ပြောထားတယ်။ ဗုိုလ်မြထွန်းဦးက ပါ တယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ ပြန် ညှိကြပါဦး။ )
ကိုးကန့်ပြသနာမှာ တရုပ်က ပါဝင် ပတ်သက်နေတယ် လုို့ဗိုလ်ချုပ်မြထွန်းဦးက သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာ ဖေါ်ထုတ်သွားတာကို သိရပါတယ်။ တရုပ် ပြည်က ပါဝင်နေတယ်ဆိုရင် အကြံပေးခြင်တာကတော့ -
က. တရုပ်သံအမတ်ကုို ခေါ်ယူသတိပေးပါ။
ခ. နိင်ငံတကာသံတမန် တွေကို ဒီအကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပါ။
ဂ. ကုလသမဂ ကို တိုင် ကြားပါ။
ဃ. တရုပ် က မြန်မာ ပြည်မှာလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုယာယီရပ်ဆိုင်းပါ။
ဒီပြသနာကို ဦးခင်ညွန့်တို့ လက်ထက်ကလို့ ရပ်ကွက်ထဲကပုံစံဖြေရှင်းလုို့ မရပါ။ နိင်ငံတကာ အဆင့် ဖြေရှင်းဖုို့ လိုတယ်။ တရုပ်တွေ စစ်သင်တန်း ၀င်ပေးတယ်ဆို တာနဲ့ လူဘိန်း ကြိုက် လုပ်လုို့ရတဲ့ခေတ် မဟုတ်ပါ။ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်နဲ ကရင်ကိုလဲ နိင်ငံခြားသားတွေမကြာခန လာပြီး သင်တန်း ပေါင်းစုံပေးဘူးကြတယ်။ ဒါကို ဦးခင်ညွန့် အဖွဲ့က စီအိုင် အေ က ကူညီနေတယ်လုို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တွေမှာသာ ပြောရဲ ခဲ့တယ်။ အမေရီကန် သံရုံကို တခါမှာ ကန့် ကွက် စာပေးတာ ပြောတာ မကြားဘူးပါ။
စီအိုင်အေက ပေးနေ တယ်ပြောပြီး အမေရိကန် က အစိုးရကို၊ ကုလသမဂ ကုိုတိုင်ရင် အရှက် ကွဲမှာပါ။ဘာဖြစိလုို့လဲ ဆိုတော့ နိင်ငံခြားသားတွေက တဦးခြင်း ကိုယ်ခံစားချက်နဲ့ ကိုယ် အကျိုးနဲ့ ကိုယ် လာပေးကြတာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ နိင်ငံတွေကို ကိုယ်စားမပြုကြပါ။ သူတို့ နိင်ငံတွေရဲ့ပေါ်လစီမဟုတ်ကြပါ တရုပ်က တကယ်ပါရင် အထက် က အကြံပေးတဲ့အချက်တိုင်း ဆောင်ရွက်ဖုို့မြန်မာ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကို တိုက်တွန်းပါတယ်။
ရှေ့ တန်းရောက် ဒဏ်ရာရ တပ်မတော်သားတွေကို ကူညီကြ၊ အားပေးကြရုံ၊ ၀ါဒဖြန့် နေကြရုံနဲ့ တရုပ်ရဲ ကျူးကျော်မှုကို မခု ခံနိင်ပါ။ တရုပ်က မြန်မာ ပြည်ကို စီးပွားရေးအရ ၀ါးမျိုနေတာ ကြာပါပြီ။
မူးယစ် ဆေး ၀ါး
ကိုးကန့် လို့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ မူးယစ်ဆေး တွေထုတ်လုပ်နေတာ ဟာ ဗိုလ်ချုပ် အဆက်ဆက်က ဒေသဖွင့်ဖြိုးရေးကို စေတနာမှန်မှန် မလုပ်ကိုင်ခဲ့တာ။ မမှန်ကန် တဲ့ပေါ်လစီ တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒ်အပြင် ယာမားထုတ်လုပ်ရေးမှာ စစ်တပ်က ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ယ်တိုင် ပါဝင် ပတ်သက်နေတာတွေကို ဖေါ်ထုတ် အရေးယူ ဖုို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင် ဘယ်သူကမှ ယုံကြည်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုးကန့် ကိစ မှာ တရုပ်က ပါတယ်လုို့စစ်တပ်က စွပ်စွဲရင် တရုပ်ကလဲ မြန်မာ က မူးယစ်ဆေးဝါးမှာ ပတ်သက်နေတာတွေကို အထောက်အထား တွေ ပြလာနိင်တာကိုလဲ ကြိုတင်စဉ်းစားထားဖုို့ လိုတယ်။
တရုပ် ပါတာလား။ တရုပ် အစိုးရပါတာလား ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ။ ဦးအောင်မင်း ဖေဖေါ်ဝါ ရီလ ၁၉ ရက်နေ့ဒီဗွီဘီ အင်တာဗျုးမှာ တရုပ်အစိုးရ မပါဘူးလုို့ ပြောထားတယ်။ ဗုိုလ်မြထွန်းဦးက ပါ တယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ ပြန် ညှိကြပါဦး။
ကိုးကန့်ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ UNFC ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
Posted by PNSjapan at 12:12 PM0comments
အာဏာငတ်တဲ့လူတွေနဲ့ ... ထမင်းငတ်တဲ့လူတွေ
ရန်ကုန်ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုံတွင် စုပေါင်းပြီးသပိတ်တိုက်ပွဲဝင်နေသော သပိတ်မှောက်အလုပ်သမားများ မနေ့ ညနေပိုင်းက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရ ပြီး အလုပ်သမားရာနှင့်ချီ ၍ အဖမ်းခံ ခဲ့ရသည် အလုပ်သမားများစွာ အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ခံရသည် ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် အဖမ်းခံရသော အလုပ်သမား ၈ ဦးပြန်လည်လွတ် မြောက်လာပြီး အလုပ်သမားများစွာ ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိနေပါသည်။ ယခု အခါ အလုပ်သမားသပိတ်များ ပြန် လည် စုပေါင်း၍ သပိတ်တိုက်ပွဲဆက် လက်ဆင်နွှဲနေကြပါသည်။ အလုပ်သ မား သပိတ်စခန်းအနီး ရဲတပ်ရင်း...များ အရပ်ဝတ်စွမ်းအားရှင်များ SB စရဖ များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ အပြင် ယူနီဖောင်းပြည့် ကြက်ခြေနီ တံဆိပ်တပ်လူအင်အား ၂၀၀ ခန့် ဖြင့် အသင့်စောင့်နေကြပါသည်။
Posted by PNSjapan at 11:38 AM0comments
Posted by PNSjapan at 11:32 AM0comments
Posted by PNSjapan at 11:20 AM0comments
“ချင်းရွှေဟော် ကနေ လောက်ကိုင်အထိ အစိုးရတပ်ပြည့်နေတာဘဲ၊ သူတို့ဘဲ ထိန်းချုပ်ထားတာ။ လောက်ကိုင် မှာလဲ ဒကစ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့တပ်က တကယ့်တောင်ပေါ်မှာဘဲ။ မြို့နားတောင် ကပ်လို့မရဘူး။ အဲဒီတပ် တွေကဘဲ အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာ တွေ့တဲ့သူတိုင်းကို ပစ်သတ်နေတာ။ အခု
Post by Aung N Htwe.
မိကျောင်းကန်ပြည်သူတွေ ဘိုးဘွားပ်ိုင်မြေပြန်လည် တောင်းခံ ဆန္ဒပြ သပိတ်မှောက်ခဲ့သော ပြည်သူတွေကိုပုဒ်မ၁၈နှစ်မှုထပ် မြို့တော်ခန်းမတခါးကို ပိတ်ဆို့မှုနှင့် စည်ပင်ပုဒ်မ၄ခုဖြင့် မိကျောင်းကန် ပြည်သူကျား ၃ မ၁၁ ယောက် ပေါင်း ၁၄ ဦးတို့အား အလုပ်ကြမ်းနှင် ထောင်ဒါဏ် ၆ စီချ လိုပြီဟု သတင်း ရရှိသည်
ဒီမို ကရေစီဆန်သော လုပ်ရပ် တခုမှ မရှိခဲ့ပါ။ ကလိမ်စေ့ ငြမ်းစင်၍ အာဏာကို လက်လွှတ် မသွားအောင် အမြဲ ကြံစည်နေသော မိစ္ဆာ စစ် အုပ်စုသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာ တရား ရှိဟန် ဆောင်နေသော ဓမ္မန္တရယ်ကောင်တွေ သာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ တရုတ်ကြောင့် လယ်တီသိမ်ဖျက်သလို၊ သံဃာ ကိုလည်း မီးလောင်တိုက်သွင်းခဲ့ပြီး ရွှေဝါရောင် သံဃာ သပိတ်မှာ စစ်ဖိနပ်နဲ့ ခေါင်းနင်းတာ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်တွေ ဝင်စီးတာ၊ ဖမ်းဆီး နှိပ်စတ်တာ၊ ဖျက်ဆီးတာ၊ သတ်ဖြတ်တာ၊ ဓတ် တိုင်ကြိုးတုတ်ရိုက်တာ စသဖြင့် မျိုးစုံလုပ်ခဲ့တာ မကြာသေးခင်ကာလက ဖြစ်သလို ပြည်သူအများ မမေ့ကြသေးပါ။ ယခုလောလောလတ်လတ်ကို ဘုန်းကြီးကျောင်း ထဲ ဖိနပ်စီးထားသော မင်းအောင်လှိုင်ကို ထင်ထင် ရှားရှားမြင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတင်မကပါ သန်းရွှေ တမိသားစုလုံး စီးသလို ဗိုလ်သိန်းစိန်လည်း စီးတာ လူတိုင်း မြင်ဖူးကြပါသည်။ ဒါဟာ ဘုန်းကြီးခွင့်ပြုလို့ ဘာလို့ အရေးမကြီးဘူး
တနိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံး ပါဝင်တဲ့ တနုိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆုိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (အန်စီစီတီ) နဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးရမယ့်အစား အစိုးရအနေနဲ့ တဖွဲ့ချင်းစီ လက်မှတ်ထိုး ခိုင်းတဲ့အတွက် တိုင်းရင်းသားတွေချင်းချင်း နားလည်မှု
ရှမ်းပြည်အရှေ့မြောက်ပိုင်း ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသထဲမှာ တိုက်ပွဲ အပြင်း အထန်ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလမှာ ပူးပေါင်းကြတာဖြစ်ပြီး ပူးပေါင်းတဲ့ အင်အား၊ လက်နက် အပါအ၀င် အသေးစိတ်ကိုတော့ ဦးထွန်းမြတ်လင်းက ဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူး။
ဦးဖုန်ကြားရှင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုးကန့်တပ်ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဖို့ကို ငြင်းဆန်ခဲ့အပြီးမှာ အစိုးရက မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်တယ်ဆိုပြီး တပ်မတော်က တိုက်ခိုက် မောင်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကိုးကန့် အင်အားစုတချို့က နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေ အနေနဲ့ "မြန်မာ" ဟု ခံယူစေလိုကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ပြော
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အသီးသီး၏ ရပ်တည်မှု သဘောထား များအပေါ် စာနာပါကြောင်း၊ အားလုံးက တူညီသောစိတ်ဖြင့် မြန်မာစိတ်မွေးကြပြီး မြန်မာဟု သာ ခံယူစေလိုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတစ်ခုတွင် ညီညွတ်သော အင်အားရှိရန် လိုကြောင်း၊ စုစည်းညီညွတ်မှုရှိမှသာ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မြန်မာဟူ၍ ရပ်တည်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့၏ ကောင်းသောအမွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်ရန် ဆန္ဒပြုပါ ကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ယနေ့နံနက် ၈နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ (၆၈)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအား တွေ့ဆုံရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားကြောင်း အစိုးရ က ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ဥက္ကဋ္ဌ စောမူတူးဆေးဖိုး၊ ရှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီ/ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် (RCSS/ SSA) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွက်ဆစ်၊ ”၀“ ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် အထူးဒေသ -၂ (UWSA) ဗဟို ကော်မတီဝင် ဦးအောင်မြင့်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် တပ်မတော် ရှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်း အထူးဒေသ-၄ ((NDAA) ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံလူ၊ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီ) KNU/ KNLA (PC) မှ စောရင်နု၊ ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြု ကရင် တပ်မတော် (KKO) မှ စောမူရှေး၊ မွန်ပြည်သစ် ပါတီ (NMSP) ဗဟို ကော်မတီဝင် နိုင်ဟံသာဗွန်ခိုင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးဝင်း၊ ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေး ပါတီ/ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် (SSPP/SSA) နာယက ဦးဆေးထင်၊ ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး (CNF) ဗဟို ကော်မတီဝင် ဒေါက်တာ ရွှေခါးရ်၊ ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး ပါတီ(ALP) ဗဟို ကော်မတီ ဝင် ဒေါ်စောမြ ရာဇာလင်း၊ ပအိုဝ်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (PNLO) ဥက္ကဌ ခွန်မြင့်ထွန်း၊ နာဂအမျိုးသား ဆိုရှယ်လစ် ကောင်စီ NSCN(K)မှ ဦးကျော်ဝမ်းစိန်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရသည်။
မျှော်မှန်းသလောက် ခရီးမပေါက်သေးသော ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက် ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ကမ်းလှမ်း ထားချက်ဟာ ပျက်ပြယ်သွားပါပြီ။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ ၁၆ ဖွဲ့နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေး အဖွဲ့ (NCCT) ဘက်က အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်သလို အစိုးရ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ (UPWC) ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ကိုယ်တိုင်ကလည်း အတည်ပြု ပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ လက်မှတ် မထိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းကတော့ အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာ ညှိနှိုင်းဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ အချက်တွေ ကျန်ရှိနေသေးပြီး အဲဒီ အချက်တွေကို ဖြေရှင်းရမယ့် ၇ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကြီး ကျင်းပဖို့
Post by The Irrawaddy (Burmese Version).
အစိုးရ စစ်တပ်က ပလောင် (တအာင်း) အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA) နဲ့တိုက်ပွဲမှာ ရဟတ်ယာဉ် အသုံးပြုပြီး တိုက်ခိုက်တဲ့ ရုပ်သံမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မိုးမိတ်မြို့နယ် လွယ်ဆာကျေးရွာ အနီးမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့ညနေ ၅ နာရီခန့်မှာ ပစ်ခတ်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ပွဲကြောင့် နှစ်ဖက်တပ်တွေ သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရမှုတွေ ရှိသလို ဒေသခံတချို့သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထောင်နဲ့ ချီတဲ့ ဒေသခံတွေလည်း အိုးအိမ်တွေစွန့်ခွာပြီး မိုးမိတ်နဲ့ မိုးကုတ်မြို့တွေပေါ်မှာ စစ်ဘေးခိုလှုံနေကြရပါတယ်။
ရုပ်သံ မှတ်တမ်း - TSYO
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက် ၂၀၁၅ ခု။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ် (၁၀၀)ပြည့်နှင့် (၆၈)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား တက်ရောက်ကြပါရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် ပြည်ထောင်စုဘွား တိုင်းရင်းသား ညီအကိုမောင်နှမများ ခင်ဗျား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ် (၁၀၀)ပြည့်နှင့် (၆၈)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား တက်ရောက်ကြပါရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေနဲ့ ပက်သက်လုို့ ၄ ပွင့်ဆုိုင် ဆွေးနွေးပွဲကုို ရန်ကုန်တက္ကသုိုလ် စိန်ရတုခန်းမမှာ ဒီကနေ့ ကျင်းပ
အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေကြမ်းပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များဘက်က တောင်းဆိုထားသော အချက် ၁၁ ချက်ကို စတင်မဆွေးနွေးမှီ အကြို ဆွေးနွေးမှုများအဖြစ် ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များက တင်ပြလာသော အချက် ၉ ချက်ကို ယခုပြုလုပ်လျက်ရှိသော လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲတွင် လတ်တလောဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ကျောင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များဘက်က ဆွေးနွေးရန် တင်ပြတောင်းဆိုလာသော အချက် ၉ ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
၁။ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ကြိမ်ပြီးတိုင်း သဘောတူထုတ်ပြန်ချက်များ ပူးတွဲ ထုတ်ပြန်ရမည်။
၂။ ဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို ပြည်သူလူထုသို့ လွတ်လပ်စွာသတင်းထုတ်ပြန်ခွင့် ပြုရမည်။
၃။ ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း ညီတူညီမျှ တန်းတူအခွင့်အရေး ရှိရမည်။
၄။ သဘောတူညီမှုသည် ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ၏ သဘောတူညီမှုကို အခြေခံရမည်။
၅။ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသော ကျောင်းသားဆရာ သမဂ္ဂများ၏ တရားဝင်မှုကို လေးစားစွာအသိအမှတ် ပြုရမည်။
၆။ ပညာရေးမူဝါဒနှင့် ဥပဒေများ နည်းဥပဒေများ ဆက်စပ်ဥပဒေများ ရေးဆွဲရာတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူ ကိုယ်စားလှယ်များ ဆရာဆရာမ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ရမည်။
၇။ ဒီမိုကရေစီ ပညာရေးသပိတ်တွင် ပါဝင်သူ မည်သူ့ကိုမျှ သပိတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးယူခြင်းမပြုရ။
၈။ ကျောင်းသားပြည်သူများ ကျေနပ်သော ပညာရေးဥပဒေကြမ်း နည်းဥပဒေများ ဆက်စပ်ဥပဒေများ ရက် (၃၀) အတွင်း ဆွေးနွေး ရရှိလာရမည်။
၉။ လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုရာတွင်လည်း ကျောင်းသားထု၏ လိုလားချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိရမည်။
(ပုံစာ- ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတုခန်းမတွင်ပြုလုပ်လျက်ရှိသော အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှမြင်ကွင်းအချို့)